Iwo akanakisa maficha ekuita vhidhiyo mafoni | IPhone nhau
Vhidhiyo yekufona yave ndiyo yakanyanya kunaka simba ramba uchikurukura nevatinoda Kure. Pakati peinopfuura mwedzi watakaisirwa chirwere checoronavirus, mazhinji maapplication akazove akakurumbira, mashandisiro ayo kune vazhinji vashandisi anga asingazivikanwe.
Mumwedzi iri kuuya, isu tichafanirwa kuramba tichichengetedza kushamwaridzana nevamwe vedu uye mhuri, kureba kunogona kutakurika, kana tikashandisa mamwe maficha ekufona, nekuti havazi vese vanotipa zvakafanana mabasa. . Pano tinokuratidza maapplication akanakisa ekuita mafoni efoni.
2 Jitsi Tosangana
3 Hangouts Sangana
Marco Polo ndechimwe chediki diki mafomu anowanikwa paApp Store iyo inotibvumidzawo kuita vhidhiyo yekufona. Iko kushanda kwechishandiso kuri inosangana nenhamba yefoni, saka tinogona chete kuzvishandisa kubva kumafoni nhare. Kana isu tiri mune yevhidhiyo kufona, isu tinokwanisa kuitirana nayo kuburikidza nenhevedzano yezvakafanosarudzwa emateikoni anoratidzwa kurudyi kwescreen.
Marco Polo anotibvumidzawo tumira mameseji evhidhiyo, senge chero kumwe kunyorera mameseji uye inozivikanwa nekuve imwe yeanyore maitiro ekushandisa. Kunyangwe tichikwanisa kurishandisa mahara, isu tine patinogona kunyoreswa pamwedzi kwema9,99 euros, kunyoreswa kunotibvumidza isu kutaura hurukuro dzatinadzo.
Kutenda kuna Jitsi Sangana, tinogona kufonera vhidhiyo, pasina zvirambidzo, kubvira huwandu hwevatori vechikamu inogumira kusimba rebasa uye inowanikwa bandwidth. Iwe haufanire kunyoresa chero nguva kuti ushandise kunyorera, vhidhiyo mafoni anodzivirirwa nephasiwedi uye akavharidzirwa uye inowirirana nemakomputa emakomputa kuburikidza nechero browser.
Mhinduro kumakambani ayo Google anotipa ndeye Hangouts Sangana, maHangouts ekare akashandurwa kumakambani uye inowanikwa mukati meG Suite Enterprise. Muganhu wevatori vechikamu unosvika kuvanhu mazana maviri nemakumi mashanu, ine otomatiki subtitle transcriptsevhisi sevhisi, inosangana neGoogle Chalenda kubata misangano pamwechete. Hangouts Meeet inoshanda kuburikidza nekubatanidza, chinongedzo chinotibvumidza isu kuwana iyo vhidhiyo kufona kuburikidza nekushandisa.
Instagram inotibvumidzawo kuita vhidhiyo yekufona, vhidhiyo yekufona iyo, senge WhatsApp, inogumira kumapato mana, saka kana zvido zvako zvekubatana zvakakwirira, uchafanirwa kusarudza imwe yemhinduro dzatinokuratidza mune ino chinyorwa. Kuita vhidhiyo kufona kuburikidza ne Instagram, isu tinongofanirwa kugadzira hurukuro nevanhu vana vatinoda kupindira uye tinya pane vhidhiyo kamera icon kuti utange vhidhiyo kufona.
Kana isu tikataura nezve vhidhiyo yekufona, vanhu vane mukurumbira kwazvo vachatora Skype kuverengera, rimwe remasevhisi ekutanga ekupa ese mavhidhiyo mafoni uye VoIP mafoni. Skype inowanikwa pane ese desktop uye nharembozha ecosystems, saka tinogona kuramba tichikurukura nevatinoda kubva kune chero chinhu.
Vhiki rapfuura, Skype yakavhura Sangana Izvozvi, chinhu chitsva chinokutendera iwe kuti ugadzire misangano nevanhu vanosvika makumi mashanu uye vatinogona kujoina usinga fanirwe kunyoresa sevhisi kana kupinda muchikumbiro. Kugona kuwana urwu rudzi rwemusangano, kwete kuti uvhiringidzike neyechinyakare vhidhiyo mafoni, isu tinongofanirwa kubaya pane iyi link.
Skype ndeyaMicrosoft, saka kushandisa sevhisi iyi, isu tinongofanirwa kushandisa account @outlook, @hotmail, @ msn ...
Imwe yemashandisirwo akakura zvakanyanya kubva denda ratanga, rave Zoom, chishandiso chakaonekwa inobatanidzwa mukupesana kwakasiyana kwekuchengeteka (izvo zvakamanikidza hurumende zhinji kuti zvirege kuzvishandisa) uye zvakavanzika (iyo Facebook API yakadhindwa data kubva kune vese mushandisi uye chishandiso).
Basa hombe rakabvumidza iyo kuti ive inonyanya kufarirwa kunyorera ndiyo nzira yekubatanidza vhidhiyo kufona: kuburikidza nekubatanidza. Nekudzvanya pane iyi link, iyo application inovhura yega (matinofanira kupinda nechero account) uye tinowana vhidhiyo yekufona, vhidhiyo yekufona iyo mune yayo yemahara vhezheni inobvumidza inosvika makumi mana vanopindirana.
Iyi nzira yekubatanidza yakafanana neiyo Skype inotipa isu neiyo Sangana Zvino basa. Nekudaro, Sangana Izvozvi zvinotibvumidza isu kujoina hurukuro. pasina kunyoresa muchikumbiro, saka Microsoft haina kuwana chero data kubva kwatiri, data iro kana iwe ukanyoresa Zoom.
Imwe yemhinduro dzakasiyana idzo Google inoita kuti dziwanikwe kwatiri kuita vhidhiyo mafoni dzinogona kuwanikwa muGoogle Duo. Google Duo inotibvumidza kuti tiite vhidhiyo inoshevedza nemapato anosvika gumi nemaviri. Iyo inosangana nenhamba yefoni, saka inoshanda chete pane mafoni uye kwete pamahwendefa kana pamatafura.
Kana iwe uchigara uchishandisa Facebook Messenger kuramba uchikurukura neshamwari dzako, zvingangoita kuti iwe zvakare shandisa yavo vhidhiyo yekufona sevhisi, vhidhiyo yekufona sevhisi iyo, seWhatsApp, inotipa isu. nhamba diki kwazvo yevanopindirana: 6.
Mavhiki mashoma apfuura, akaburitsa desktop application, kunyorera kunotibvumidza kuita mafoni efoni sezvatinoita kubva kunharembozha yedu. Ichi chishandiso chinowanikwa mune zvese Chitoro cheMicrosoft cheWindows 10 uye Mac App Store yeiyo macOS ecosystem.
FaceTime ndiyo chikuva icho Apple chinoita kuti chiwanikwe kwatiri kuita vhidhiyo kufona, chikuva icho inobvumira vanosvika makumi matatu nevatatu panguva imwe chete. Dambudziko chete nebasa iri nderekuti rinongowanikwa mukati meiyo Apple ecosystem, saka tinogona kungoishandisa chete neshamwari kana mhuri vane mudziyo wakagadzirwa muCupertino.
WhatsApp yakaunza vhidhiyo kusheedzera makore maviri apfuura. Kubva ikozvino, yakagara ichingogumira mukana wekuita vhidhiyo kufona kune vatori vechikamu 4, asi denda raifanira kuuya risati raona iko kusanzwisisika kwaro kwaraipa. Iyo yazvino beta yeWhatsApp, Wedzera huwandu hwevatori vechikamu muvhidhiyo kufona kusvika pa8.
Parizvino, hatizive kuti iyi vhezheni itsva yeWhatsApp ichabuda riini beta, asi haifanire kutora nguva yakareba kana iwe uchida kudzosa vese vashandisi vakarega kushandisa chikuva chako kuita vhidhiyo kufona. Ndinovimba kana huwandu hwevatori vechikamu hwakawedzerwa, hunhu husina kunaka hwawakagara uchipa kuburikidza neshumiro yako huchavandudzika.
Nhasi, Teregiramu haina kutipa vhidhiyo mafoni, asi chii ndichaita gore risati rapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iwo akanakisa mafomu ekuita mafoni evhidhiyo
Apple neGoogle zvinopa rumwe ruzivo nezve yavo yekutevera system vachipesana neCOVID-19